Razer si loo bilaabo nooc hufan oo ka mid ah Razer Phone 2 | Androidsis
Dhowr maalmood ka hor soo saaraha qalabka ciyaaraha Razer, ayaa soo bandhigay jiilka labaad ee Razer Phone, taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee lagu soo bandhigo muuqaalka 120 Hz iyo in loo qaabeeyey si dadka jecel ciyaaraha fiidiyowga moobiilka ay ugu raaxeysan karaan si buuxda.
Jiilkan labaad, oo hadda kaliya laga heli karo Mareykanka qiime dhan 799 euro, waxaa lagu heli karaa madow iyo cirro, laakiin sida laga soo xigtay ilo kala duwan, soo-saaraha qalabka ayaa bilaabi kara nooc hufan oo mobilada ah, nooc laga yaabo inuu suuqa ku gaaro qiimo isku mid ah.
Dhaqan ahaan, Razer waxay soo saartay dhammaan noocyadeeda kala duwan ee madow, laakiin xilliyadii u dambeeyay waxay umuuqataa in taasi is beddeleyso, dhawaana waxay qorsheyneysaa inay soo saarto nooc ka mid ah laptop-ka Blade 15 ee meerkuriga cad.
Waxay u muuqataa in dabeecadda hal-abuurnimada ee shirkaddu muujisay ay bilaabatay inay is bedesho, taas oo sidoo kale u oggolaan doonta inay soo jiidato a tiro aad u tiro badan oo macaamiil ah kuwaas oo ku daalay midabka madow ee soo jireenka ah ee casriga ah. Iyadoo la tixgelinayo in taleefanka Razer loogu talagalay dhagaystayaal aad u gaar ah, soo bandhigista moodal leh gadaal hufan ayaa u oggolaan doonta inay u noqoto xulasho isticmaaleyaal badan.
Hadda ma ogin haddii dhabarku noqon doono mid gebi ahaanba hufan ama wax tarjumaya sidaan ku aragnay Xiaomi Mi 8 Explorer ama HTC U11 Plus iyo H12 Plus. Waxa iska cad ayaa ah in soosaarayaasha ay dooranayaan inay soo saaraan kaliya midabyo cusub qalabkooda, laakiin waxay sidoo kale bilaabeen inay adeegsadaan jumlado muujinaya midabyo kala duwan markay iftiinka iftiiminayaan. Waxay umuuqataa in shirkaduhu aysan rabin inaan ku isticmaalno daboolkeena boosteejooyinka, maxaa yeelay moodooyinka qaar runti waa ceeb in la isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Razer si loo sii daayo nooca hufan ee Razer Phone 2